YEYINTNGE(CANADA): Sunday, July 03
Message from Aung San Suu Kyi to Côte Saint-Luc (Canada)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/03/20110အကြံပြုခြင်း
Aung San Suu Kyi at Human Rights Walkway in Canada
Helen Suzman (1917- 2009): Helen Suzman was an anti-apartheid activist and politician in South Africa noted for her strong public criticism of the policies of apartheid atatime when this was unusual among whites. Accused byaminister of asking questions in parliament that embarrassed South Africa, Suzman replied: “It is not my questions that embarrass South Africa, it is your answers.” In 1996, she was at the side of President Nelson Mandela, when he signed the new South African constitution in 1996. [View the dedication ceremony... ]
Aung San Suu Kyi (1945 - ): In 1988, Aung San Suu Kyi became the major leader of the movement toward the reestablishment of democracy in Burma. In 1991, while under house arrest by the government for her activities, she was awarded the Nobel Peace Prize. She was released in 2010 having spent 15 of 21 years under house arrest.
21 June 1967 မှာမွေးတဲ့ president of Bangkok-based property developer SC Asset Co., Ltd.,တဦးဖြစ်သူအရင်Pheu Thai Party ခေါင်းဆောင် Thaksin Shinawatra ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံး Yingluck Shinawatra ဟာခြောက်ပတ်လောက်ပဲနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးဝန်ကြီးချူပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Pheu Thai Party ဟာ၅၀၀မှာ၂၉၉ထိုင်ခုံရပါတယ်။အာဏာရ Democrat party က 132 ခုံရပါတယ်။
Democrat party လက်ရှိဝန်ကြီးချူပ် Abhisit က Pheu Thai Partyအနိုင်ရတာကိုဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြား
ခဲ့ပါတယ်။Thaksin Shinawatra ကလည်းညီမငယ်လေးအတွက်ဝမ်းမြောက်နေပါတယ်။
သူမအကြောင်း Wikipedia မှာဒီလိုဖေါ်ပြထားပါတယ်...
Yingluck is the youngest of nine children from Mr. Lert and Mrs. Yindee Shinawatra (daughter of Princess Jantip (Na Chiangmai) Raminkwong). She graduated withabachelor's degree from the Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University in 1988 and earnedamaster's degree in Public Administration (specialization in Mgt Info Systems) from Kentucky State University, United States, in 1991.
Yingluck worked at Shinawatra Directories Co., Ltd. and was the Managing Director of Advanced Info Service PCL or AIS,amobile phone provider formerly controlled by Thaksin, before its sale to investors. She was investigated by Thailand's Securities and Exchange Commission regarding possible insider trading after she sold shares of her AIS stock foraprofit prior to the sale of the Shin Corporation to Temasek Holdings.
Yingluck is alsoacommittee member and secretary of the Thaicom Foundation. She has one son with her common-law husband, Anusorn Amornchat, Managing Director of M Link Asia Corporation PCL, which is her sister's company. Her sister is Yaowapa Wongsawat, former prime minister Somchai Wongsawat's wife.
After People's Power Party,apolitical party that had strong ties to ex-prime minister Thaksin, had been dissolved by the Constitutional Court of Thailand due to the behaviour of its executives that violated election law, Thaksin decided to set up another party to be his nominee party to conduct political activity inside the nation. Since the establishment of the party, Yingluck was among Thaksin’s first choices to be the leader of the party. However, she refused to accept the position saying that she did not want to be the prime minister and only wanted to focus on doing her business. She said that she did some political activities only because the party sent an invitation letter for her to join.
Conflict within Pheu Thai Party
Prior to the eve of 2011, many Pheu Thai Party members who support Mingkwan Sangsuwan travelled abroad to visit Thaksin to discuss Thaksin’s decision to choose Yingluck asaleader for MP party list candidate. They believed that pushing people who are directly related to Thaksin would be difficult becauseasignificant percentage of Thai citizens have strong feelings against him. However, Thaksin maintained his decision since he believed thataperson in his own family would never betray him.
The Pheu Thai Party voted on 16 May 2011 to name Yingluck as the party's top candidate under the country's party list system. The vote positions her against Democrat Party member and current Thai prime minister Abhisit Vejjajiva in the country's general election, scheduled for3July. Even though Yingluck's brother Thaksin won't be on the ballot in 2011, her selection again makes the former premieramajor issue in discussions surrounding the future of the Thai premiership. After Yingluck's nomination, Thaksin said that if his sister becomes the next prime minister, it will effectively allow him to control Thai government even though he is currently servingafive-year political ban for electoral fraud. Thaksin has also been living in self-imposed exile since 2008 to avoidajail sentence after he was convicted of abuse of power.
After Yingluck was officially nominated by the Pheu Thai Party to be the party candidate, which traditionally means she is the prime minister candidate from Pheu Thai Party, she declared her vision as the new leader of the party to the public. One of her main campaign issues is reconciliation for all citizens to bring back unity to the nation.
On 15 May 2011, the Democrat Party invited Yingluck Shinawatra toapolitical debate with its leader, prime minister Abhisit Vejjajiva, as election campaigns are becoming heated on the eve ofageneral election to be held in Thailand on July 3. Pheu Thai Party declined the invitation. Chalerm Ubumrung, one of Pheu Thai Party executives, declared that the national debate is not necessary for Thai politics since it is only used in presidential elections.
Yingluck’s bank account was among 86 bank accounts that were accused of funding support for the Red Shirt protestors during their demonstrations in 2010. During this period of time, chaos occurred throughout the nation especially in the Bangkok Metropolitan area. Based on the investigation of the Department for Special Investigation, during 28 April 2009 – May 2010, around 317 million baht flowed through her account. 150 million baht was deposited while 166 million baht was withdrawn. On 28 April 2010 alone, 144 million baht was withdrawn. Beginning 28 April 2010, the chaotic situation went from bad to worse. On 28 April,afight occurred in Don Mueang District, Bangkok, andasoldier was killed. On 7–8 May, two policemen were killed duringariot in Saladang district, Bangkok. On 14 May, fights occurred in many parts of Bangkok which led to several deaths.
Yingluck was said to have helped her brother, Thaksin Shinawatra and then sister in-law conceal their wealth. Yingluck received 0.68% of Shin Corp shares out of the 46.87% that Thaksin and his then wife held in 1999. Assets Examination Committee (AEC) claimed that Yingluck had made up false transactions and that “there were no real payments for each Ample Rich Co.,Ltd shares sold” and “the transactions were made atacost basis of par value in order to avoid income taxes, and all the dividends paid out by Shin to those people were transferred to Potjaman's bank accounts”. Now as Prime Minister of Thailand, the matter will be dropped.  Yingluck however claimed that “her family has been asavictim of political persecution”.
လေယာဉ်နဲ့ မသွားဘူးလား ဆရာ။ လမ်းခရီး အချိန် အတိုင်းအတာအရ …
၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်တော့…သူ့ကို လူအုပ်ကြီးက…မဆလ အစိုးရသူလျှိုဆိုဝိုင်းဖမ်းပြီး သတ်မယ်လုပ်တယ်….အဲဒီတုန်းက မြင်ကွင်းကို အခုထိမြင်ရောင်နေတုန်းပဲ….ရိုက်နှက်ထားလိုက်တာ …တကိုယ်လုံးရစရာမရှိဘူး…ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေသိတော့…သူ့ကိုမသတ်ဘို့..ကျနော်တို့မေတ္တာရပ်ခံ တယ်…နောက်…ဆေးရုံကိုပို့လိုက်တယ်…..ဆေးရုံရောက်တော့…မျက်နှာဆိုတာဇီးရွက်လောက်လေးပဲရှိတယ်….သူ့ကိုကယ်ဘို့တစာစာတောင်းဆိုနေတာပဲ…..ကျနော်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပါတယ်….အသက်ပြင်းတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူး…မသေဘူး….ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေဝေးသွားလိုက်တာတနေ့ရိပ်သာတခုကိုရောက်သွားရင်းနဲ့က…သူနဲ့ပြန်ဆုံခွင့်ရလိုက်တယ်….အဲဒီအချိန်မှာ…သူဟာရဟန်းဝါ၁၀၀ါလောက်ရနေတဲ့သံဃာတစ်ပါးဖြစ်နေပြီ…..အတိတ်တခါကလူဆိုးလူမိုက်ကိုဖိုးလုံးဘ၀နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှတကယ့်ကိုမယုံနိုင်လာက်အောင်ပြောင်းလည်းသွားပြီ……ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါပြောတယ်…..
“ဦးဇင်းက….နှစ်ဘ၀ပြောင်းသွားပြီဒကာကြီး….ဟိုးတချိန်ကကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေကိုပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း…နောင်တရမိတယ်…တကယ်တော့..ဦးဇင်းခံခဲ့ရတာဟာ..ကိုယ်ပြုသမျှကံ..ကိုယ်ပြန်ခံရတာပါ..ဒါ့အတွက်ဦးဇင်းဖြေသာပါတယ်….ဒါပေမဲ့…ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမလား…ဒကာတို့ကျောင်းသားတွေကောင်းမူ့ကြောင့်..ဦးဇင်းအသက်ရှင်သန်ခွင့်ရပြီး…ဘ၀ပြောင်းသွားတာ……ပြန်ပြောရရင်လေ…သိပ်ရှက်ဘို့ကောင်းတာပဲ….ဦးဇင်းလူဝတ်ကြောင်ဘ၀တုန်းက…ပညာဆိုတာလည်းမသင်ခဲ့ရ..ဓနဥစ္စာကလည်းမရှိ…ကိုယ့်ကိုသွန်သင်ပြသပေးမဲ့သူကလည်းမရှိ ဆိုတော့…ဆိုးချင်သလောက်ဆိုး မိုက်ချင်သလောက်မိုက်ပဲ…ဒကာကြီးတို့သိပါတယ်….ဦးဇင်းက အဲဒီတုန်းက ..အဲသလို လူတွေကို အနိုင်ကျင့်ရတာကို သိပ်ပျော်တာ…..လူတယောက်ကို ထိုးလိုက်ကြိတ်လိုက်ပြီးပြီဆို သိပ်ပီတိဖြစ်တာ….အော်..တကယ်ကကိုယ်မခံရသေးလို့ဒီလိုလုပ်နိုင်တာပါ….ဦးဇင်းစဉ်းစားမိတယ်…လူပြိန်းဆို တာ…ဗိုလ်ကျရတာကို သိပ်ကြိုက်တာ ဒကာကြီးရ……….”
“ဦးဇင်းခံရတဲ့အလှည့်ကျ…မခံစားနိုင်တော့ဘူး…အရမ်းကြောက်တယ်..သေရမှာကိုအရမ်းကြောက်တယ်….တုန်လူတ်တယ်……သူများကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာ….ကိုယ့်ခံရတာ..ကိုယ့်အသားနာတာမှမဟုတ်တာ…လုပ်ရဲတာပေါ့…ဒုတ်နဲ့လည်းရိုက်ရဲတယ်…ဓါးနဲ့လည်း..ခုတ်ရဲတယ်….ကိုယ့်အသားကို..၀ါးခြမ်းပြားလေးလောက်နဲ့အရိုက်ခံရတာမျိုးကြတော့ .တော်တော်မခံနိုင်တာပဲ ဒကာရေ…ကိုယ်ချင်းစာတရား မဲ့တယ်ဆိုတာ..ဒါပေါ့…..နောက် ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်မိတယ်…..လူတွေဟာ…လူလူချင်းဗိုလ်ကျရတာကိုကြိုက်ပုံရတယ်….အရသာခံတွင်းတွေ့ပုံ လည်းရတယ်ဗျ…..ဦးဇင်းဆရာတော်က ဘာပြောသလည်းဆိုတော့….အစိုးမရတဲ့လောကကြီးကို အစိုးရချင်တာ လူ့သဘာဝပါပဲတဲ့….”
ကျနော့်ရှေ့ကထိုင်ပြောနေသူဟာ..တချိန်ကလူဆိုးကိုဖိုးလုံးဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစွလို့တောင်စဉ်းစားမိတယ်…..သူ့ရဲ့လက်တွေ့ဘ၀ကပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေ..ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကပေါ်ထွက်လာတဲ့..အမှန်တရားတွေ…..ဟုတ်တယ်…လူ့ရဲ့သဘောသဘာဝဆိုတာအားလုံးအတူတူပါပဲ….ကိုဖိုးလုံးမှမဟုတ်ပါဘူး……..ဗိုလ်ကျရ တာကိုအရသာတွေ့တာ..အနိုင်ယူအနိုင်ကျင့်ရတာကိုခံတွင်းလိုက်တာ….ဒီမကောင်းတဲ့ သဘောသဘာဝကြီးကို အသိဥာဏ်ရှိသူများကစာနာစိတ်တွေ၊ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေ၊ဥာဏ်ပညာတွေနဲ့ဆင်ချင်ယူကြရတာကိုး…….ဒါကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားလိုက်ရင်….သူက သာယာသွားတော့တာပဲ….ဗိုလ်ကျစိုးမိုးချင်တဲ့စိတ်ဟာ..အတန်းပညာ အတတ်ပညာတတ်မြောက်ထားခြင်းတွေမထားခြင်းတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး….ဗိုလ်ကျတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာ…မိမိရဲ့သာလွန်ချက်နဲ့ လူတွေကို အနိုင်ကျင့်တာ….အာဏာရှိသူက အာဏာနဲ့၊ငွေရှိသူကငွေနဲ့၊ပညာတတ်သူက ပညာနဲ့၊ မိုက်ရိုင်းရဲသူက မိုက်ရိုင်းရဲတဲ့အားနဲ့ လူတွေကို အနိုင်ကျင့်တာဟာ ဗိုလ်ကျတာပဲ၊ ကိုဖိုးလုံးကတော့ သူက မိုက်ရိုင်းရဲတယ်…..ထောင်ထဲတန်းထဲကို မျက်ကန်းတစ္ဆေ မကြောက်တိုးဝင်ရဲတယ်…လူအများစုက သူ့လို လိုက်မလုပ်ရဲတော့ သူကလူတွေကို အနိုင်ကျင့်တယ်…ဗိုလ်ကျတယ်……
နောက်တယောက်က…ကျနော်သရက်ထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဘ၀နဲ့ရှိနေစဉ်အချိန်ကပါ….နံမည်ကမျိုးတင့်….သူ့ကိုငှက်ရိုးလို့ပဲလူသိများကြတယ်…အဲဒီအချိန်ကသရက်ထောင်ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအ ကျဉ်းသားအားလုံးသိကြတယ်။သူကကျနော်နေခဲ့တဲ့တိုက်အကျဉ်းဆောင်ရဲ့ရှေ့မှာတောင်ယာလာလုပ်တဲ့သူ…ကျနော်နဲ့ကတဒေသသားထဲလည်းဖြစ်ပြန်…၈၈အရေးတော်ပုံအမူ့လည်းဖြစ်ဆိုတော့တော်တော်ခင်မိတယ်…..သူ့တောင်ယာကထွက်တဲ့သီးနှံတွေဆိုလည်းကျနော်ကိုလာပေး…ကျနော်ကလိုအပ်တဲ့စားစရာလေးတွေထဲ့..သူကစားဖိုမှာသွားချက်….စားကြပေါ့….နိုင်ငံရေးထူးသတင်းထူးလေးတွေကြားလာရပြီဆိုကျနော့်ဆီအမြန်လာပြောတယ်……ဒီလိုနဲ့နေလာရာက………… ထောင်ပိုင်ကြီးဆီမှာသွားသွားနှိပ်ပေးရတဲ့အလုပ်ပေါ်လာတယ်…ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လည်းမသိ…သိပ်မကြာခင်မှာပဲထောင်ပိုင်ကသူ့ကိုတထောင်လုံးတန်းစီးဆိုခန့်လိုက်တယ်လေ(တထောင်လုံးတန်းစီးဆိုတာ..ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုအကျဉ်းသားအချင်းချင်းပြန်အုပ်ချုပ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာအကြီးဆုံးပေါ့)…အဲဒီအချိန်ကစလို့..ငှက်ရိုးစတိုင်ကပြောင်းသွားတယ်(အရင်ငှက်ရိုးမဟုတ်တော့ဘူး)ကျနော်ကတော့ကိုယ့်လူတ ယောက်တထောင်လုံးတန်းစီးဖြစ်သွားရင်…အကျဉ်းသားတွေအပေါ်သက်သက်ညှာညှာရှိလောက်ပါရဲ့…နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသားများအခွင့်ရေးလည်းနားလည်တန်ကောင်းလောက်ပါရဲ့ဆိုထင်လိုက်တာ..ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မ လည်း…ကိုယ့်လူက…ဇာတိပြလာတော့တာ….သူတန်းစီးဖြစ်လို့မကြာခင်..သာမန်ရာဇ၀တ်အကျဉ်းသားတွေအပေါ်အနိုင်ကျင့်တော့တာပဲ….သူ့မျက်လုံးနဲ့မတွေ့တဲ့သူဆို…ဒုတ်နဲ့ရိုက်….လူတွေကိုရိုက်နေရတာ…သူကကစား နေသလိုမျိုဲး….သူလာရင်ကျိုးနွံတဲ့ပုံစံနဲ့နေပေးရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုကြည့်ပီတိဖြစ်နေတာ……ဒီလိုနဲ့နေလာ ရင်းကသူကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်တောင်ဗိုလ်ကျလာတယ်၊ကွယ်ရာမှာဆိုရာဇ၀တ်အကျဉ်းသားတွေကိုပြောရင်….မင်းတို့ထက်ပိုတဲ့….ဘယ်သူမှထိန်းလို့မရတဲ့….ငါးည(နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုဆိုလိုတာ)တွေ တောင်သူကဘယ်လိုနိုင်အောင်ထိန်းတာ…ဘယ်လိုပြားဝပ်နေအောင်လုပ်ထားတာ…စသဖြင့်မဟုတ်တာတွေ ပြောပြီး…စကားလုံးတွေနဲ့ဗိုလ်ကျတယ်……ကုန်ကုန်ပြောရရင်လမ်းလျှောက်တာတောင်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး…သူ့ နောက်က တပည့်တပမ်းတွေနဲ့ မြောက်ကြွမြှောက်ကြွဖြစ်လာတော့တာပဲ…ကျနော့်ဆီလည်း မလာတော့ဘူး ( မလာတော့ဘူးဆိုတာထက် မတွေ့ချင်လို့ရှောင်နေတယ်ဆိုတာ ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်)၊ တစတစနဲ့ ငှက်ရိုးအခြေနေကပိုဆိုးလာတယ်….တထောင်လုံးမှာရှိတဲ့အားလုံးသောအကျဉ်းသားတွေတောင်မကဘူး…. ထောင်မူးအဆင့်အရာရှိတွေဝန်ထမ်းတွေကပါ..တော်တော်ကိုမျက်မုန်းကျိုး မုန်းတီးခံရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ထောင်ပိုင်က ဘယ်ဝန်ထမ်း ဘာလုပ်သလည်း သူ့ဆီကို အကုန်သတင်းပို့ရမယ်ဆိုပြီး သူ့ကိုခိုင်းထားတော့…..မှတ်စုစာအုပ်တအုပ်နဲ့ အကုန်မှတ်တမ်းတင် သတင်းပို့နေတော့တာပဲ…..သူအမြဲ လက်သုံးပြောနေကြစကားက…..“ကျုပ်ကတာဝန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်…ဘယ်သူ့မှမညှာဘူး…စည်းကမ်းဖောက် ဖျက်သူမှန်သမျှအကုန်အရေးယူမယ်”တဲ့….သူ့စကားကဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိဘူး…ဒီစကားသုံးရအောင်…နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းလည်းမဟုတ်…သူ့ဘ၀က…သူလိုကိုယ်လိုအကျဉ်းသားဘ၀…..တခါ ..ထောင်ပိုင်ကလည်း စစ်ဗိုလ် ( ဗိုလ်ကြီးဘ၀ ) ကနေ အသွင်ပြောင်းနဲ့ရောက်လာတာမှ မကြာသေး…ဆိုတော့….ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ရေဒီယိုပျက်တွေ့ကြတော့တာပဲ…..အကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေကို ကျော်ပြီးလုပ်ချင်ရာတွေလုပ်တော့တယ်…..နှစ်ယောက်လုံးကဗိုလ်ကျနေရတာကိုအရသာတွေ့နေကြတာ……အဆုံးမတော့ကောင်လေးတယောက်ကိုယောကျာင်္းချင်းကာမဆက်ဆံဘို့ကြိုးစားရာက…တထောင်လုံးတန်းစီးရာထူးပြုတ်…တိုက်ပိတ်…နောက်ရဲဘက်ပို့ခံရ…ရဲဘက်ရောက်တော့….သူနှိပ်စက်ထားတဲ့သူတွေက…လက်စားချေသတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်……
လူပြိန်းလက်ထဲ…လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသွားပြီဆို….ဗိုလ်ကျတတ်တာဓမ္မတာပါပဲ……သူ့မှာစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အရည်ချင်းမှမရှိတာ….သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သမျှဟာ…သူ့အတ္တကိုအခြေခံပြီး…လာတာဆိုတော့…ဘယ်မှန်နိုင်ပါတော့မလည်း………လူပြိန်းဆိုတာ..သူသိတာအခုပဲရှိတယ်…အဲဒါ…သူ့အတ္တ..တနည်းအားဖြင့်သူ့လောဘ…….ပညာ နည်းမှလူပြိန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး…ပညာ တတ်တွေထဲမှာလည်း…လူပြိန်းတွေ အများကြီး…
ဗိုလ်ကျချင်တဲ့သူဆိုတာ….အခုအမှန်ဟာတော်ကြာမှားရင်မှားမယ်….အခုအမှားဟာခနနေ..မှန်ရင်မှန်မယ်…..သေချာတာ တခုကတော့….သူတို့ရဲ့ အမှန်တရားဆိုတာ…သူတို့ရဲ့အတ္တပဲ…။
ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အာဏာရှင်များကိုပဲကြည့်ပါ…..သူတို့ တိုင်းပြည်ကို ချုပ်ကိုင်ထားတာ တခုတည်းသောပေါ်လစီပဲရှိပါတယ်…ဒါကတော့…ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြင်းဆိုတဲ့မူကလွဲလို့တိကျခိုင်မာတဲ့သဘောတ ရား လမ်းစဉ် ဥပဒေဆိုတာ မရှိပါဘူး ( လူရိုသေရှင်ရိုသေစာအုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ပြုစုထားပေမဲ့ လက်တွေ့ကတော့ ဒီသဘောတရာလမ်းစဉ်တွေကိုပစ်ပယ်ပြီး လက်တန်း အမိန့်တွေနဲ့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးတခုသာလျှင်ရှိပါတယ်)
2 attachments — Download all attachments (zipped for )
KIA ၊ မြန်မာ့တပ်မတော် နှင့် ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်
တနင်္ဂနွေ, 03 ဇူလိုင် 2011
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဟာ တကယ်တမ်း အနားယူ သွားတာမဟုတ်ဘဲ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေကို နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်နေဆဲဖြစ်တယ် လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့  အထ္ထုပ္ပတိစာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သူ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား စာရေးဆရာ Benedict Rogers က ပြောဆိုပါတယ်။ "Than Shwe: Unmasking Burma's Tyrant = မြန်မာပြည်က အာဏာရှင်ရဲ့  မျက်နှာဖုံးကို ခွါချခြင်း" ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ရေးသားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့  စာအုပ်ကြောင့် စာရေးဆရာ Benedict Rogers ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီနှစ်ဆန်းမတ်လအတွင်းက အလည်အပတ် သွားရောက်စဉ်မှာ တိုင်းပြည်ကနေ နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ဝါရှင်တန်မြို့ တော်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Benedict Rogers ကို ဦးသန်းလွင်ထွန်း က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီစာအုပ်မှာ အာဏာရှင်တဦးရဲ့  မျက်နှာဖုံးကို ခွာချခြင်းဆိုတော့ ဒီအာဏာရှင်ရဲ့  ဘယ်လိုအကြောင်းအချက်တွေကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးသားထားနိုင်ခဲ့သလဲ။
Benedict Rogers ။ ။ မြန်မာပြည်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးဆုံး အာဏာရှင် တဦး ဖြစ်ပေမဲ့ သူ့အကြောင်းကို လူသိနည်းပါတယ်။ ဝါရှင်တန်၊ လန်ဒန်၊ နယူးရော့ခ်မြို့ ကြီးတွေမှာ လမ်းမပေါ်က လူတွေမေးလိုက်ရင် Robert Mugabe, Kim Jong-il, Fidel Castro တို့နဲ့ တခြား အာဏာရှင်တွေကို သိကြပေမဲ့ သန်းရွှေ ဘယ်သူလဲဆိုတာကို သိသူ သိပ်မရှိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်ဟာ သူ့အကြောင်းကို လူသိအောင်။ ဗမာပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ခံစားနေကြရတဲ့ ဒုက္ခတွေအကြောင်း လူတွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိလာအောင် မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောပါ။ သူ့အကြောင်း ဘာတွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သလဲဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့  လုပ်ပုံကိုင်ပုံ၊ စရိုက်လက္ခဏာ၊ စစ်တပ်ထဲမှာ ဘယ်လို အဆင့်ဆင့် ရာထူးတွေ ရလာခဲ့သလဲ စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ စစ်တပ်ထဲမှာ သူဟာ တကယ် တိုက်ရည် ခိုက်ရည် အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ စစ်သားတယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း သူဟာ အထက် လူကြီးတွေအပေါ် ရိုရိုသေသေနဲ့ သစ္စာရှိကြောင်း ပြတတ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့  ရည်မှန်းချက်တွေကို သိုသိုဝှက်ဝှက် ထားတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေကို သူကို အန္တရာယ်ရှိသူအဖြစ် မမြင်ကြတာပေါ့။ တဖြည်းဖြည်း အထက်ကို ရောက်လာသူပါ။ နောက်ဆုံး ထိပ်ဆုံးကို ရောက်လာမှပဲ သူက အပိုင်းပိုင်း ခွဲခြားပြီး တော့ အပေါ်က အသာစီးယူ အုပ်ချုပ်မှု၊ Psych-war စိတ်ဓါတ်ရေးရာ စစ်ဆင်မှု၊ နေရာပေး အသုံးချတတ်မှုစတဲ့ သူ့ရဲ့  ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ပြသလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ အရည်အချင်းပြည့်တဲ့ စစ်သားတယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ အများထင်ထားသလောက် မညံ့တဲ့ ပါးရည်နပ်ရည်ရှိသူတဦး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီစာအုပ်ကို ရေးသားပြုစုနေတဲ့အချိန်က ဘယ်လောက်အထိ သုတေသနပြုဖို့ အချိန်ရခဲ့ သလဲ။ အတွင်းက အချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်များရှိခဲ့ပါသလဲ။ အထူးသဖြင့်တော့ နောက်ပိုင်းမှာ စွပ်စွဲလာတာက အစိုးရပိုင်းက စွပ်စွဲလာတာက ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေက တိကျမှန်ကန်မှု မရှိဘူးလို့ ပြောနေကြတယ်။ အဲဒါလေးကို နည်းနည်းလေး ရှင်းပြပေးပါ။
Benedict Rogers ။ ။ ဒီစာအုပ်ကို ပြည့်စုံတိကျတဲ့ အထ္ထုပ္ပတိစာအုပ်လို့ မဆိုချင်ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အကြောင်းကို ပြုစုရတာ အလွန်ခက်ပါတယ်။ သူနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ စာရေး ခွင့်ပန်ပေမယ့် ပြန်ကြားချက် မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူနဲ့ သူ့မိသားစုနဲ့ရော သူနဲ့လက်ရှိနီးစပ်တဲ့ လူတွေကို မေးမြန်းခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်အတွက် ဘယ်သူတွေက ကူညီပေးခဲ့ကြသလဲဆိုရင်တော့ (၁) စစ်တပ်ထဲက ဘက်ပြောင်းလာသူတွေ။ (၂) အတိုက်အခံ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ (၃) နိုင်ငံရပ်ခြား သံတမန်တွေ ဆိုပြီး သုံးမျိုးသုံးစား ပြောနိုင်ပါတယ်။ တချိန်က စစ်တပ်ထဲမှာ သူနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူတွေ သူကို သိခဲ့ဘူးသူတွေနဲ့ သူအစိုးရလက်ထက်မှာ ဖိနှိပ်မှုနဲ့ ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ အတိုက်အခံတွေ ပြောပြကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိသလို။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေ၊ ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေ၊ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် Razali Ismail နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ပါမောက္ခ Yozo Yokota တို့တတွေက သူတို့ သိခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ကိုယ်တိုင်က သူ့ရဲ့ အကြောင်း ကိုယ်ရေး အချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့က သိပ်ပြီးလျှို့ ဝှက်လှတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဗမာပြည်သူတွေ အနေနဲ့ရော ပြည်ပကလူတွေအနေနဲ့ သိခွင့်မရကြတော့ ဒီအကြောင်းအချက်တွေကို ကိုးကားဖို့တော့ အတော်လေး အခက်အခဲရှိခဲ့မှာပေါ့။
Benedict Rogers ။ ။ အကြောင်းအရာတချို့ ဆိုရင် တကယ်တမ်း မှန်မမှန် စီစစ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါဟာ လူတော်တော်များများ ပြောနေကြတဲ့အကြောင်း၊ စီစစ်လို့မရသေးတဲ့ ကောလဟလ စသဖြင့် စာအုပ်ထဲမှာ ခွဲခြားပြီတော့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သူ့ရဲ့  မွေးသက္ကရာဇ်၊ မွေးရာဇာတိလိုဟာမျိုးတွေမှာပဲ အမျိုးမျိုးငြင်းခုန်နေကြတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာ အများစုဟာ အချက်အလက်တွေကို အခြေခံထားတာပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရအပိုင်းကတော့ မကျေနပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကြောင့်ပဲ Benedict Rogers ကိုယ်တိုင် မကြာသေးခင်ကပဲ ဗမာပြည်ကို အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေတုန်း အထိန်းအသိမ်းခံရပြီး တိုင်းပြည်ကနေ နှင်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ကြားသိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို နည်းနည်းလေးပြောပြပါ။
Benedict Rogers ။ ။ အတော်စိတ်လှုပ်ရှားကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ကျနော်ရောက်ပြီးတော့ တပတ်အကြာမှာ ပြန်ခါနီး နောက်ဆုံးည (၁၁) နာရီလောက်မှာ ဟော်တယ်ဘားခန်း (hotel bar) ထဲက ဂျက်စ်ဂီတတီးဝိုင်း (Jazz concert) မှာ နားထောင်နေတုန်း ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူတွေ ရောက်လာကြပါတယ်။ ကျနော့်အခန်းမှာ မေးကြမြန်းကြ၊ ရှာဖွေကြလုပ်ပြီး ကျနော့်ကို နောက်နေ့မှာ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးဖို့ နေပြည်တော်က ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘာအကြောင်းကြောင့်လည်းလို့ မေးတော့ သူတို့က မဖြေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ကိုင်ထားတဲ့ ဖိုင်ထဲမှာ ကျနော့် ဒီစာအုပ်ရဲ့  မျက်နှာဖုံးကော်ပီကို တွေ့ရလို့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ကျနော် ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ နောက်တနေ့ လေယာဉ်ကွင်းမှာ ကျနော်ကို လေယာဉ်ပေါ် မတင်ပေးခင်မှာ စကားစမြည် ပြောကြတော့မှ ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ရှိသူတွေက မြန်မာပြည်က အာဏာရှင်ရဲ့  မျက်နှာဖုံးကို ခွာချခြင်းဆိုတဲ့ စာအုပ်ကြောင့် တိုင်းပြည်က နှင်ထုတ်ခဲ့ဖို့ ညွှန်ကြားချက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီ စာအုပ်ကို ရေးလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြပြီးတော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံကနေ နှင်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ ဒါဟာ မျှတတဲ့အကြောင်း ပြချက်လို့ ယူဆပါသလား။
Benedict Rogers ။ ။ ကျနော်အမြင်က မတရားဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် လူ့ဘောင်မှာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ စာအုပ်တအုပ်ကို ရေးသားခွင့်ဆိုတာ တကယ့် အခြေခံ လွတ်လပ်ခွင့်တခု ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကြောင့် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးတာလို့ သိရတော့ ချက်ချင်းပဲ အဲဒီထောက်လှမ်းရေးအရာရှိကို ပြန်မေးမိတာက စာအုပ်တအုပ်ရေးတာဟာ ရာဇဝတ်မှုလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ သူတို့လည်း အဲဒီမေးခွန်းကို ချက်ချင်းပြန်မဖြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ရာဇဝတ်ှု မကျူးလွန်ဘဲ အခုလို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးတာဟာ တရားသလားလို့ ကျနော်က ဆက်မေးတော့မှ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိက ဒီစာအုပ်ကို ကျနော်တို့ မဖတ်ရသေးလို့ တရားသလား၊ မတရားသလားဆိုတာကို မှတ်ချက်မပေးနိုင်သေးပါဘူး။ ကျနော်တို့လည်း အထက်က ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လုပ်ရတာပါလို့ ဖြေပါတယ်။ နောက်တယောက်ကတော့ စာအုပ်ကော်ပီ အပိုပါသေးလားလို့ ကျနော့်ကို မေးပါတယ်။ ကျနော်က အခုတော့ မရှိသေးဘူး။ လိုချင်ရင် စာတိုက်က ပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ် ခင်များတို့ လိပ်စာပေးပါလို့ ဟာသနှောပြီး ပြောလိုက်ရပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဗမာနိုင်ငံက လူအများစုကတော့ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ရသေးမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ဒီစာအုပ်က အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတယ်။ ဗမာပြည်မှာလည်း ထုတ်ဝေခွင့်မရှိဘူးပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒီစာအုပ်ကို နောက်ပိုင်းမှာ ဗမာလို ဘာသာပြန်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ တဆက်တည်း မေးချင်တာက အခု ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ စာရေးဆရာအနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အကြောင်းကို သေချာလေ့လာထားတော့ အခုလက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့  လက်ရှိအနေအထားအရဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ ရာထူးကနေ တကယ် အငြိမ်းစားယူသွားပြီလား။ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်နေသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
Benedict Rogers ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တကယ့်ကို အငြိမ်းစားယူသွားပြီ။ အေးအေးလူလူ ဂေါက်သီးကစားနေတယ်။ မြေးထိန်းနေတယ်လို့ ကျနော်မယူဆပါဘူး။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့  စရိုက်လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ သူက နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေဆဲပါပဲ။ လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အစိုးရထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကို ကြည့်ရင် သူရွေးထားတဲ့လူတွေကြီးပါ။ သူတို့ဟာ တကယ်တမ်း အာဏာမရှိသေးပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ သူ့ရဲ့  အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့၊ သူနဲ့ သူ့မိသားစု၊ နီးစပ်သူအသိုင်းအဝိုင်း အိုးအိမ်စည်စိမ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ အမြဲစိုးရိမ်တကြီး ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူအနားမယူနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါအပြင် သူ့ရှေ့ က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနေဝင်း ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်သိခဲ့သူ ဖြစ်တာမို့ အလားတူအဖြစ်မျိုး သူကိုယ်တိုင် မကြုံတွေ့ရအောင် သူနောက်ကွယ်ကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးကိုင်နေအုန်းပါမယ်။ ဘယ်လောက်အထိ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားမယ်ဆိုတာကို မသိနိုင်သေးပေမဲ့ လောလောဆယ်မှာတော့ သူက ကန့်လန့်ကားနောက်ကွယ်က ရုပ်သေးဆရာကြီးပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗမာပြည်မှာရောက်နေတဲ့ အချိန်တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့သလား။ တွေ့ဖြစ်ခဲ့သေးသလား။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အာဏာရှင်ရဲ့  မျက်နှာဖုံးကို ခွာချခြင်းအမည်ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့  အထ္ထုပ္ပတိကို ရေးသားခဲ့သူ Benedict Rogers ကို မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/03/2011 1 အကြံပြုခြင်း
Message from Aung San Suu Kyi to Côte Saint-Luc (C...
လူထုကို မျက်နှာမူတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ စီအာရ်ပီပီ...
အာဏာရှင်မျက်နှာဖုံး ဖြုတ်ခွာလိုက်သူနဲ့ စကားပြောဆို...